Waalli Waxaan Ogaaday In Aanan Waxba La Noolayn: W/Q. Hassan Horri - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Waalli Waxaan Ogaaday In Aanan Waxba La Noolayn: W/Q. Hassan Horri
Waxaan ogaaday in aanan waxba la noolayn. Maalin oo dhan Hargeysa ayaa la rabaa in aan wax la qaybsado. Habeenkiina naf Maraykan ah ayaa igelaysa oo waxaan dhex fadhiyaa miisaska looga taliyo xisbiga dimuqraadiga.
Maanta waxaa la xusayay sannad-guuradii shanaad ee ObamaCare. Bar-kulanka ay isugu tageen dad ka bada 17 milayan waxaa ay ahayd www.uniteblue.com
Haddaba waxaa la soo bandhigay 100ka qof ee ugu saamaynta badnaa marka laga doodayo ObamaCare oo ah mashruucii ugu weynaa dhinaca caafimaadka ee soo maray taariikhda Marayka oo dad badani taageerayaan. Dad kalena ka soo horjeedaan.
Haddaba marka laga soo tago Madaxweynaha, ku xigeenkiisa, guddoonka barlamaanka, hoggaankii xisbiga, golaha wasiirada, ururada ololaynta bal waxaad aragtaa lambarka 25aad. Oo maxaa dhex-dhigay?Waalli iga dheh.